एक तलाक वकिल आवश्यकता छ जो व्यक्तिगत रूपमा तपाइँलाई मद्दत गर्दछ?
सबैको लागि, सम्बन्ध विच्छेद एक प्रमुख घटना हो। यसैले हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरू व्यक्तिगत सल्लाहको साथ तपाईंको सेवामा छन्। सम्बन्ध विच्छेदको पहिलो चरण भनेको सम्बन्धविच्छेद वकिलमा बोलाउनु हो। न्यायाधीशले सम्बन्धविच्छेदको फैसला सुनाउँछन् र एक वकिलले मात्र सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्छ।
तपाईंको सेप्टेसनको साथ सहयोग चाहिन्छ?
कृपया हाम्रो डाइभरी मालिकहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्
सबैको लागि, सम्बन्ध विच्छेद एक प्रमुख घटना हो। यसैले हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरू व्यक्तिगत सल्लाहको साथ तपाईंको सेवामा छन्।
> हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरूले तपाईंलाई समर्थन गर्दछ
> सम्बन्ध विच्छेद वकील संग एक भेट? यो तपाईं कसरी तयारी गर्नुहुन्छ!
> भेटघाटको बारेमा जानकारी
> मैले कुन कागजातहरू ल्याउनु पर्छ?
> सम्बन्धविच्छेद र बच्चाहरू
> आफ्नै कम्पनी र तलाक
> व्यक्तिगत दृष्टिकोण र मार्गदर्शन
सम्बन्ध विच्छेदको पहिलो चरण भनेको सम्बन्धविच्छेद वकिलमा बोलाउनु हो। न्यायाधीशले सम्बन्धविच्छेदको फैसला सुनाउँछन् र एक वकिलले मात्र सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्छ। सम्बन्धविच्छेदको कार्यवाहीका विभिन्न कानुनी पक्षहरू छन् जसमा न्यायाधीशले फैसला सुनाउनेछ। यी कानूनी पक्षहरूका उदाहरणहरू:
Your तपाइँको संयुक्त सम्पत्ति कसरी वितरण हुन्छ?
Your के तपाईंको भूतपूर्व पार्टनर तपाईंको निवृत्तिभरणको एक अंशमा हकदार छ?
Your तपाईको सम्बन्ध विच्छेदको कर नतिजा बारे के हुन्छ?
Your के तपाइँको पार्टनर पार्टनर गुनासोको हकदार छ?
So यदि हो भने, प्रति महिना गुनासो को राशि कति छ?
• र यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने, कसरी बच्चा सम्बन्धी मामिलाहरू सम्हाल्छन्?
Child बच्चा समर्थन कसरी व्यवस्थित गरिएको छ?
हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरूले तपाईंलाई समर्थन गर्दछ
त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेदको समाधानका केहि पक्षहरू छन्। बाट सम्बन्ध विच्छेद वकिल Law & More सम्भव भएसम्म यी पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग र मार्गदर्शन गर्न सक्छ। हाम्रो वकिलहरू पारिवारिक कानूनको क्षेत्रमा विशेषज्ञ छन्। के हामी जान्न उत्सुक छौं कि हामी तपाईंको लागि के गर्न सक्दछौं? त्यसोभए सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.
हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरु को एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ र भविष्य को लागी उपयुक्त समाधान खोज्न को लागी तपाइँ संग काम गर्नेछ। हामी प्रत्येक कानुनी पक्षलाई हेर्छौं र तपाईंको लागि उत्तम सम्भव नतिजा प्राप्त गर्न कोसिस गर्छौं।
शीर्षकहरू जुन हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं:
• सम्बन्ध विच्छेद;
• प्यारेन्टिंग योजना;
Ren बहुपक्षीय सम्झौता;
Assets संयुक्त सम्पत्ति को वितरण;
• बच्चा गुनासो;
Ner साझेदार गुनासो;
• बच्चाहरूको पहुँचको अधिकार;
Iscal वित्तीय परिणामहरू।
सम्बन्ध विच्छेद वकील संग एक भेट? यो तपाईं कसरी तयारी गर्नुहुन्छ!
तपाईं र तपाईंको साथीले निर्णय गर्नुभयो। तपाईं एक तलाक प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। तर अब के हो? यस दूरगामी निर्णय पछि पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम एक तलाक वकील मा कल छ। सबै भन्दा पछि, जब एक सम्बन्ध विच्छेदको समाधान हुन्छ, विभिन्न व्यावहारिक मात्रै होइन कानूनी मुद्दाहरू पनि उठ्दछन्: तपाईको संयुक्त घर र धितो राखी के हुन्छ भने, उदाहरणका लागि? तपाईंको बचत र बैंक खाताहरूको वितरण कसरी व्यवस्थित गरिनेछ? र कसले आफ्नो बच्चाहरु को दैनिक वा आर्थिक हेरचाह को ख्याल राख्नुहुन्छ? सम्बन्ध विच्छेद वरपरका सबै कानुनी मुद्दाहरूको व्यवस्था र रेकर्डिंगका साथ सकेसम्म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्षम हुनको लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको सम्बन्ध विच्छेद वकिलसँग सबै आवश्यक जानकारी र कागजातहरू छन्।
भेटघाटको बारेमा जानकारी
तपाईंको सम्बन्ध विच्छेद वकील संग बैठक को तयारी गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो पूर्व पार्टनर संग धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको छलफल। तपाईको सम्बन्धविच्छेद पछि भविष्यलाई तपाईको संयुक्त घर, आर्थिक अवस्था र तपाईको सम्भावित बच्चाहरु सम्बन्धी कस्तो लाग्छ? यदि त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट भन्दा पहिले नै एउटा सम्झौता भएको हुनुपर्दछ, उदाहरणका लागि घर वा दैनिक हेरचाहको बारेमा र तपाइँको बच्चाहरूको साथ सम्पर्कको सम्बन्धमा, तब एक संयुक्त तलाकका वकिलले सजिलै र द्रुत रूपमा यी सम्झौताहरूलाई सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता र प्यारेन्टिंग योजनामा ​​रेकर्ड गर्न सक्दछन्।
के यो छलफल गर्न र तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग संयुक्त व्यवस्था गर्न सम्भव छैन? त्यसोभए तपाईं आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद वकीलमा कल गर्न सक्नुहुन्छ जो तपाईंको लागि उत्तम सम्भव नतिजा प्राप्त गर्न कोसिस गर्दछ। त्यो अवस्थामा, यो अझै पनि सुझाव दिइन्छ, तपाइँको सम्बन्ध विच्छेद वकील संग बैठक को तयारी को लागी, तपाइँ कुन महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरु समाधान गर्न चाहानुहुन्छ र कुन तरिकामा आफैलाई सोध्नुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाइँ घरमा बस्न जारी राख्न र तपाइँको बच्चाहरु को दैनिक हेरचाह गर्न चाहानुहुन्छ? त्यो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद वकिलले तपाईलाई ठीक के के व्यवस्था गरिनु पर्छ र कसरी र यी प्रबन्धहरू कसरी महसुस गर्ने भन्ने कुरा भन्न सक्छन।
अब केस स्क्यान गर्नुहोस्!
मैले कुन कागजातहरू ल्याउनु पर्छ?
केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जम्मा गर्नु र उनीहरूलाई सम्बन्ध विच्छेद वकीलसँग तपाईंको भेट्ने ठाउँमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण छ। सर्वप्रथम, तपाईंले आफ्नो विवाह पुस्तक वा सहवास सम्झौता र सम्भवतः पूर्वअनुमति सम्झौतासहितको काम ल्याउनु पर्छ। यस कागजातले तपाईंको र तपाईंको पूर्व पार्टनरहरूको कानूनी स्थितिमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ र थप सम्झौताको लागि सुरूवात बिन्दु बनाउँछ। के तपाईं र तपाईंको पूर्व पार्टनर सँगै एक (भाडामा) घर छ? यदि हो भने, तपाईंले बैठकमा तपाईंको धितो गिरोह वा भाँडाको सम्झौता पनि ल्याउनुपर्नेछ। तपाईंको आर्थिक स्थिति सम्बन्धविच्छेदको सन्दर्भमा पनि प्रासंगिक छ। तपाइँ तपाइँको सम्बन्ध विच्छेद वकील तपाइँको बैंक खाताहरु र / वा बचत खाताहरु, वार्षिक बयान र अन्तिम तीन आय कर रिटर्न को एक सिंहावलोकन संग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तमा, तपाईको निवृत्तिभरण, बीमा र तपाईले प्रविष्ट गर्नुभएको कुनै debtsणको बारेमा जानकारी पनि महत्वपूर्ण छ।
जब बच्चाहरू संलग्न छन्, यो आवश्यक छ कि उनीहरूको आवश्यकताहरू पनि विचार गरिनु पर्छ। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि विनियोजनमा यी आवश्यकताहरूलाई सकेसम्म ध्यानमा राखियो। हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकिलहरु संगै एक प्यारेन्टिंग योजना को लागी तैयार गर्न सक्नुहुनेछ जसमा सम्बन्ध विच्छेद पछि निर्धारित गरीएको छ आफ्नो बच्चाहरु माथि हेरचाह को वितरण। हामी पनि बच्चा भुक्तानी गर्न वा प्राप्त गर्न को राशि गणना गर्न सक्छौं।
के तपाईं पहिले नै सम्बन्ध विच्छेद हुनुहुन्छ र के तपाईंको बारेमा द्वन्द्व छ, उदाहरणको लागि, पार्टनर वा बच्चा गुनासोको अनुपालन। वा के तपाईंसँग तपाईंको विश्वास छ कि तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग अब आफ्नै वा आफ्नो हेरचाह गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू छ भन्ने विश्वास गर्ने कारण छ? हाम्रो तलाकका वकिलहरूले त्यस्ता केसहरूमा तपाईंलाई कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्न सक्दछन्।
आफ्नै कम्पनी र तलाक
के तपाइँसँग आफ्नै कम्पनी छ र तपाइँ सम्बन्धविच्छेद गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले थप पक्षहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरूले तपाइँसँगै मिलेर विश्लेषण गर्ने प्रश्नहरू:
You तपाईसँग सेयर छ?
These के यी सेयर सम्पत्ती समुदायमा पर्छन्?
Your तपाईको कम्पनीलाई के हुन्छ?
Your तपाईको कम्पनीको लागि बिछोडको नतिजा के हुन्छ?
Tax कर परिणामहरू के हुन्?
हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकिलहरु लाई पारिवारिक कानून र उद्यमी जान्ने दुबै को ज्ञान छ र त्यसैले यी केसहरुमा कानूनी र कर सहयोग प्रदान गर्न तपाईलाई आदर्श राखिन्छ। के तपाईंलाई सम्बन्ध विच्छेद वकील आवश्यक छ? सम्पर्क Law & More.
व्यक्तिगत दृष्टिकोण र मार्गदर्शन
जबकि हामी तपाईंको सम्बन्ध विच्छेद वकील संग परामर्श गर्नु अघि केहि तयारीको सिफारिस गर्छौं, हामी Law & More बुझ्नुहोस् कि सम्बन्धविच्छेद तपाईको जीवनमा सब भन्दा टाढाको घटना हो र सम्बन्धविच्छेद पछि तपाईले भविष्यको कल्पना गर्न र सहमति जनाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण Law & More'तलाकका वकिलहरूको व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ र तपाईंसँग र सम्भवतः तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग हामी कागजातमा आधारित कुराकानीको बखत तपाईंको कानुनी स्थिति निर्धारण गर्नेछौं। हामी तपाईंको दृष्टि र भविष्यको लागि तपाईंको इच्छाहरूको नक्शा गर्नेछौं। को तलाक वकिलहरु Law & More व्यक्ति र पारिवारिक कानूनको क्षेत्रका विज्ञहरू हुन् र सम्भवत तपाईको पार्टनरसँग सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्न पाउँदा खुशी छन्।